MMK 9.49 million ထက်ပိုသောမိတ်ဆက်ညွှန်းခနှင့် ဝန်ဆောင်ခ။
မိတ်ဆက်ညွှန်းပေးသည့် လင့်ခ်ကို သင်၏မိတ်ဆွေ များထံမျှဝေပါ။.
*Easybook ၏သုံးစွဲသူအသစ်မှသာလျှင် မိတ်ဆက် ညွှန်းပေးသည့် လင့်ခ်ကိုအသုံးပြု၍ အကောင့်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
အညွှန်းရသူတယောက်လျှင် MMK 4400မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ရယူလက်ခံပါ။
အကောင့်သစ်ဖွင့်မှုအောင်မြင်ပါကသင်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေပါ MMK 4400 မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကို Easybook Wallet အတွင်း ဆုကြေးငွေအနေဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ .
6% မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ခြောက်ရာခိုင်နှုန်း
သင်ညွှန်းပေးသည့်သူမှ 6% လက်မှတ်ဝယ်ယူပြီးစီးတိုင်း သင် ၏ easybook wallet အတွင်းသို့ main cash အနေ နဲ့ မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ခြောက်ရာခိုင်နှုန်း ဝင်‌ရောက်မည်ဖြစ် ပါသည်။.
သင်၏မိတ်ဆွေများအား ယနေ့ပင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများအား ယနေ့ပင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများအား ယနေ့ပင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါ။ 2
သင်၏မိတ်ဆွေများအား ယနေ့ပင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများအား ယနေ့ပင် ညွှန်းပေးလိုက်ပါ။
တိုက်ရိုက်အညွှန်းပေးခြင်းမှနေ MMK4,400 မိတ်ဆက် ညွှန်းခ ဆုကြေးများကို လက်ခံရယူပါ။ မိတ်ဆက် ညွှန်းခ ကို Easybook Wallet အတွင်း ဆုကြေး ငွေအနေဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။.
ဘတ်စ်၊ရေယာဥ်နှင့်ကား လက်မှတ်စျေးများကို ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိ
ရထား နှင့် လေယာဥ် လက်မှတ်စျေးများကို လေးရာခိုင်နှုန်းထိ
မိတ်ဆက်ညွှန်းခဝန်ဆောင်မှု ( ထပ်ဆင့် အညွှန်းပေးသူနှစ်ယောက်ထိ)
သင်ညွှန်းပေးသည့်သူမှ Easybook တွင်လက်မှတ် ဝယ်ယူပြီးစီးတိုင်း မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ရရှိမည်။ သင် ၏ easybook wallet အတွင်းသို့ main cash အနေ နဲ့ ဝင်‌ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။.
ရထား နှင့် လေယာဥ်
မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကော်မရှင် (ညွှန်းပေးသူ A (သင် ကိုယ်တိုင်) 2% အညွှန်းရသူ B ၏ လက်မှတ်စျေး နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ , 1% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။ 0.4% အညွှန်းရသူ B ၏ လက်မှတ်စျေး နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ , 0.2% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။
မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကော်မရှင် (အညွှန်းရသူ B ) 2% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။ 0.4% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။
မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကော်မရှင် (အညွှန်းရသူ C ) - -
အုပ်စု A သည် အုပ်စု B နှင့် C မှသာ ကော်မရှင် ရရှိနိုင်ပါသည်။.
အုပ်စု B သည် အုပ်စု C နှင့် C မှသာ ကော်မရှင် ရရှိနိုင်ပါသည်။.
* ညွှန်းပေးသူတိုင်းသည် သူမှ ထပ်ဆင့်ညွှန်းပေးသူ နှစ်ယောက်အထိဆုကြေးကော်မရှင်ရရှိနိုင်ပါသည်။.
မိတ်ဆက်ညွှန်း ဝန်ဆောင်ခ နှစ်ဆ ( အနည်းဆုံး အသုံးပြုငွေဖြင့်)
မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကော်မရှင် (ညွှန်းပေးသူ A (သင် ကိုယ်တိုင်) 4% အညွှန်းရသူ B ၏ လက်မှတ်စျေး နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ , 2% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။ 0.8% အညွှန်းရသူ B ၏ လက်မှတ်စျေး နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ , 0.4% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။
မိတ်ဆက်ညွှန်းခ ကော်မရှင် (အညွှန်းရသူ B ) 4% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။ 0.8% အညွှန်းရသူ C ၏ လက်မှတ်စျေး တစ်ရာခိုင်နှုန်း။
သင်ညွှန်းပေးသူများနှင့် ထပ်ဆင့်ညွှန်းပေးသူများ၏ ဝယ်ယူမှုများမှ ကော်မရှင်ရရှိရန် တနှစ်လျှင် အနည်းဆုံး MMK 365,000 သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။.
တနှစ်အတွက်ပုံမှန်ရရှိသော ထပ်ဆောင်း ကော်မရှင် များသည် သင်၏ Easybook Wallet အတွင်းသို့ နောက်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။.
မိတ်ဆက်ညွှန်း ကော်မရှင် - ပုံဖော်ခြင်း
ညွှန်းပေးသူ A သည် အုပ်စု B မှ အယောက် ငါး ဆယ်ကို ညွှန်းပေးသည်။ အုပ်စု B မှ တ‌ယောက် ချင်းစီသည် အုပ်စု C မှ အယောက်ငါးဆယ် ကို ညွှန်းပေးသည်။
အညွှန်းရသူတစ်ယောက်ချင်းသည် ခရီးသွား လက်မှတ် များအတွက် တနှစ်လျှင် MMK365,000 သုံးသည် ဟု ယူဆသည်။.
သင်ညွှန်းပေးထားသည့် အုပ်စု B မှ စုစုပေါင်း အသုံးပြုငွေ: MMK 18.25 million (MMK 365,000 x 50 person)
သင်ညွှန်းပေးထားသည့် အုပ်စု C မှ စုစုပေါင်း အသုံးပြုငွေ: MMK 912.5 million (MMK 365,000 x 2500 person)
အညွှန်းရသူ အုပ်စု B ၏ သုံးစွဲမှုမှရရှိမည့် သင့် စုစုပေါင်းကော်မရှင် ( နှစ် ရာခိုင်နှုန်း) MMK 365,000 (2% x MMK 18.25 million)
အညွှန်းရသူ အုပ်စု C ၏ သုံးစွဲမှုမှရရှိမည့် သင့် စုစုပေါင်းကော်မရှင် ( တစ် ရာခိုင်နှုန်း) MMK 9.125 million (1% x MMK 912.5 million)
တနှစ်လျှင် ရရှိမည့် စုစုပေါင်း မိတ်ဆက်ညွှန်း ဆု ကြေး MMK 9.49 million (MMK 365,000 + MMK 9.125 million)
Easybook Wallet အတွက် ရရှိမည့် စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ
ညွှန်းပေးသူ A သည် အုပ်စု B မှ အယောက် တစ်ရာ ကို ညွှန်းပေးသည်။ အုပ်စု B မှ တ‌ယောက် ချင်းစီသည် အုပ်စု C မှ အယောက်တစ်ရာကို ညွှန်းပေးသည်။
အညွှန်းရသူတစ်ယောက်ချင်းသည် ခရီးသွား လက်မှတ် များအတွက် တနှစ်လျှင် MMK 365,000 သုံးသည် ဟု ယူဆသည်။.
သင်ညွှန်းပေးထားသည့် အုပ်စု B မှ စုစုပေါင်း အသုံးပြုငွေ: MMK 36.5 million (MMK 365,000 x 100 person)
သင်ညွှန်းပေးထားသည့် အုပ်စု C မှ စုစုပေါင်း အသုံးပြုငွေ: MMK 3.65 billion (MMK 365,000 x 10,000 person)
အညွှန်းရသူ အုပ်စု B ၏ သုံးစွဲမှုမှရရှိမည့် သင့် စုစုပေါင်းကော်မရှင် ( နှစ် ရာခိုင်နှုန်း) MMK 730,000 (2% x MMK 36.5 million)
အညွှန်းရသူ အုပ်စု C ၏ သုံးစွဲမှုမှရရှိမည့် သင့် စုစုပေါင်းကော်မရှင် ( တစ် ရာခိုင်နှုန်း) MMK 36.5 million (1% x MMK 3.65 billion)
တနှစ်လျှင် ရရှိမည့် စုစုပေါင်း မိတ်ဆက်ညွှန်း ဆု ကြေး MMK 37.23 million (MMK 730,000 + MMK 36.5 million)
ဥပမာ - Easybook Wallet အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရှိငွေ
Easybook Wallet အတွင်းရှိငွေ ( စံပုံဖော်မှုတန်ဖိုးနှင့်)
စျေးနှုန်း MMK30,000 , xxx ရှိသော လက်မှတ်ကို ဝယ်ယူ မည် ဆို ပါက လက်မှတ်စျေး၏ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုကြေး ထဲမှ အသုံးပြုနိုင်ပြီး MMK2,400 . ကျန်သည့် MMK27,600 ပမာဏကို Main Cash ထဲမှ ဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။.
Easybook Wallet အတွင်းကျန်ငွေ
$26,000 - $92 = $25,908 MMK 9.49 million - MMK 27,600 = MMK 9.4624 million $600 - $8 = $592 MMK 220,000 - MMK 2,400 = MMK 217,600
အဆိုပါ မိတ်ဆက်ညွှန်းပေးပြီးရယူပါ အစီ အစဥ် အတွက် စည်းကမ်း ချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ် ချက်များကို ဖတ်ရှု ရန်လိုအပ် ပါသည်။ ဤ အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် စည်းကမ်း ချက်နှင့် သတ်မှတ်ချက် များကိုလက်ခံသဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။.
ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆက်ညွှန်းပေးပြီးရယူပါ အစီ အစဥ်တွင်ပါဝင်ပါ။
မရွေး သင်၏မိတ်ဆွေများကို မိတ်ဆက် ညွှန်း ပေးပြီး အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်အောင်မြင်တိုင်း မိတ်ဆက်အညွှန်းဆုကြေးကိုရယူပါ။.
တနှစ်လျှင် MMK 9.49 million* ထက်ပိုသော မိတ်ဆက်အညွှန်း
သင်ညွှန်းပေးသည့်သူများ၏ ဝယ်ယူမှုများမှ ရရှိသော ကော်မရှင်မှနေ Easybook Wallet အတွင်းရှိ သင့်ပိုက်ဆံများတိုးပွားနိုင်ပါသည်။.
Easybook Wallet ဖြင့်ပေးချေပါ။
နှစ်စဥ် ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော အပိုဆုကြေး ရယူပါ။
Easybook Wallet ကိုငွေဖြည့်ပြီး အပို ဆုကြေး ငွေကို ရယူပါ။ မိတ်ဆက်ညွှန်းဆုကြေးသည်လည်း အဆိုပါ အပိုဆုကြေးစာရင်းဝင်မည်ဖြစ်သည်။.
Credit Card ဆုကြေးများလဲရရှိနိုင်သည်။
Easybook Wallet ကို credit card ဖြင့် ငွေဖြည့်ပြီး ဘဏ်မှပေးသော ဆုကြေးလက်ဆောင်ကိုရယူပါ။!
မိတ်ဆက်အညွှန်းကော်မရှင် Main Cash
မိတ်ဆက်အညွှန်းဆုကြေး Reward Cash
မိတ်ဆက်အညွှန်းကော်မရှင်သည် Main Cash ထဲ သို့ဝင်ရောက်မည်။
နှစ်စဥ် ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော အပိုဆုကြေး ရနိုင်သည်။
အသုံးပြုနိုင်ပုံ - ဘတ်စ်၊ ရထား၊ ရေယာဥ်၊ ကားနှင့် လေယာဥ် လက်မှတ်များ၏ စျေးနှုန်းအပြည့် သို့.
Main Cash ထဲတွင် သက်တမ်းနှင့်ကုန်ဆုံးရက် မရှိပါ။
မိတ်ဆက်အညွှန်းဆုကြေးသည် Reward Cash ထဲ ကိုဝင်ပါသည်။
နှစ်စဥ် ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော အပိုဆုကြေး မရနိုင်ပါ။
အသုံးပြုနိုင်ပုံ - ဘတ်စ်နှင့်ရထားလက်မှတ်များ၏ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကားနှင့် လေယာဥ် လက်မှတ်
များ၏ လေးရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆုကြေး ၏ သက် တမ်း သည် စျေးကွက် ချဲ့ထွင်ရေး အစီအစဥ်
မိတ်ဆက်ညွှန်းပေးပြီးရယူပါ အစီအစဥ်တွင် ပါ ဝင်ခြင်းဖြင့် တနှစ်လျှင် မည်မျှရရှိနိုင်သည်ကို calculator သုံးပြီးတွက်ချက်ပါ။.
တွက်ချက်မှုများသည် ဘတ်စ်၊ ရေယာဥ်နှင့် ကား များကိုပေးထားသည့် ကော်မရှင်နှုန်း များပေါ် မူတည်ပါသည်။ .
ပထမအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော အညွှန်းရသူ အရေ အတွက်။:
ပထမအုပ်စုရှိ လူတစ်‌ယောက်ချင်းစီ မှမိတ်ဆက် ပေးသော အညွှန်းရသူအရေအတွက်:
တနှစ်ချင်း ပထမအုပ်စုမှ အညွှန်းရသူ တယောက် ချင်းစီ၏ခန့်မှန်းခြေသုံးငွေ:
ပထမအုပ်စုရှိ လူတစ်‌ယောက်ချင်းစီ မှမိတ်ဆက် ပေးသော အညွှန်းရသူ တယောက် ချင်းစီ၏ ခန့်မှန်းခြေသုံးငွေ: